Bosaso: Murankii la xiriiray Golaha Deegaanka degmada Bosaso oo mel sare Gaaray.
Garowe: Cadde Muuse, Dhaqaalihii Puntland waa kordhay hadana lama qaato Mushahaar.
Waxaa meel sare gaaray khilaafkii iyo murankii u dhaxeeyay Golaha Deegaanka Degmada Bosaso iyo Golaha xukuumada ee la xiriiray xil ka qaadistii dhawaan ay Golaha degaanka degmada Bosaso ku sameeyeen duqii degmada Bosaso Khadar Xaaji Mire.
Sida laga wada warqabana Madaxwaynaha DGPL Gen. Cadde Muuse ayaa magacaabay Gudi ka kooban heer wasiir si ay u dhameeyaan khilaafkaasi kaasi oo taagan ilaa iyo hada lana oran karo waa ka sii daray waxan gudigaasi ka mid ahaa.
Madaxwaynaha iyo wasiirkiisa Dawladaha Hoose Cali Cabdi Awaare ayaa ku mar marsiiyooday in ay xil ka qaadistaasi ahayd mid sharci daro ah meesha xilka looga qaadayna uusan joogin Gudoomiyuhu iyo masuuliyiinta Dawlada Hoose balse Golaha Deegaanka ee degmada Bosaso ayaa maanta sheegay in ay diyaar u yihiin in meel kasta oo uu joogo Gudoomiyaha iyo Gudigii loo magacaabay xalinta khilaafkaasi iyo waliba mas'uuliyiinta wasaarada dawladaha hoose iyo Horumarinta reer miyiga in ay diyaar ula yihin in ay ugu sameeyaan cod aqlabiyad ah helid iyo waayidba nasiibkiisa.
Hadalkaasi ka sooyeeray xubnaha Golaha deegaanka ee dagmadaasi ayaa meel sare gaarsiiyay khilaafkii u dhaxeeya dawlada iyo golaha deegaanka degmada Bosaso kaasi oo loo qaatay ama loo fasirtay in ay damacsan yihiin in ay si aqlabiyad ah u ridaan [mar kale].
Madaxwaynaha DGPL ayaa lagasoo xigtey in uu sheegay in ay ragani [golaha degaanka Boosaaso] is dhaarsadeen sidaa daraadeedana aan loo baahnayn in mar kale codayn loo qaaday oo sidaas hada laguwada joogo lakiin Golaha deegaanka degmada Bosaso ayaa ku tilmaamay hadalkaasi mid aan loo baahnayn munasibna ahayn islamarkaana uusan ka soo yeerin nin mas'uul ah.
Sidoo kale Golaha deegaanka degmada Bosaso ayaa ugu baaqay Masuuliyiinta dawlada in nin walba uu leeyahay xad shaqadiisana uu ku ekaado waxay kaloo sheegeen in ay sidii laga yeeli lahaa Khadar Xaaji Mire ay u taalo Mas'uuliyiinta Golaha deegaanka Degmada Bosaso ee sida sharciga ah loo soo doortay, waxayna ugu baaqeen dadwaynaha Degmada iyo kuwa reer Puntland in ay fikirkooda ka dhiibtaan islamakraana ay soo fara galiyaan dhibka ay dawladu kula gal galanayso shaqadooda ayna ka shaqeeyaan dantooda.
Khadar xaaji mire ayaa waxaa lagu eedaynayaa in uu lunsaday Hanti badan iyo in uu baayac u galay Garoonka kubada cagta ee degmada Bosaso kaasi oo loo gaaray lacag dhan $400,000 dollar.
Si kastaba Khadar Xaaji Mire ayaa ah nin aan fadhiyin xafiiskiisa isaga oo ku sugan magaalada Bosaso islamarkaana aan soo xaadirin xafiiskiisa muranka wayni ka taagan yahay.
Xaalka Degmada Bosaso ayaa hada u muuqda mid muran wayni ka taagan yahay kaasi oo xalkiisu uu gancata ugu jiro dadwaynaha degmada iyo Golaha degaanka degmada Bosaso.
Madaxaynaha DGPL Gen: Cade Muuse ayaa sheegay hadal dadbadan oo reer puntland ah si wayn uga yaabiyay kaasi oo ahaa in dhaqaalihii Puntland marka loo eego sanadadii hore uu sanadkan si xawli ah u kordhay hadana aan la qaadan wax mushahaarooyin ah sanadkan intiisa badan laguna leeyahay dawlada mushahaarooyin badan si loo bixin doonana aan la ogayn maadaama uu mushaarooyinka dawlada lagu leeyahay yahay mid xad dhaaf ah oo aysan dawladu bixin karin.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in dhamaan laamaha kala duwan ee ay khusayso arimaha bixinta mushaarooyinka gaar ahaana kuwa dawlada aan wax mushahaar ah ka qaadan sida, ciidanka amaanka gabi ahaantiis haday ahaan lahayd Daraawiishta iyo haday ahaan lahayd Booliska iyo ciidamada kala duwan kuwa qalabka sida, minishiibiyada, GBB da, kuwa dhafoorka iyo dhamaan shaqaalaha kale ee dawaldu ay qayb ka mid ah bilaha badan ee ay san qaadan wax mushahaar ah ay iska cafiyaan si loo helo mushahaar joogto ah.
Madaxwaynaha puntland ayaa balan qaaday hadii ay sidaas sameeyaan in aysan bil danbe ka daahi dooni kana dibdhici doonin mushaarooyinka isla markaana ay ku bixin doonaan bil walba 29keeda iyada oo joogto ah waa sida uu hadalka u dhagaye.
Tiro ka 10 jeer ayuu madaxwaynuhu hadalkan oo kale jeediyay wax ka naasacadaadayna ma jiraan sida daraadeed dadbadan oo reer puntland ah ayaa markay markale hadalkaasi maqleen ku tilmaamay hadal la iska yiri oo aan mas'uul ka soo yeerin, waxayna sheegeen in uusanba khajilayn oo shaaric walba la taagan yahay hadalo Puntland wax u dhimaya oo gaf ah loona baahan yahay inta xal loo helo Puntland isla markaasna aan waqti loogu darin xukuuumada uu hoggaamiyo Cadde Muuse.
Cade Muuse Madaxwaynaha DGPL ayaa looga bartay hadalo aan loo meel diyin macna wayna aan samaynayn kuwaasi oo inta badan ka xanaajiya bulshada kana yaabiya, qaar badan oo ka mid ah bulshada ayaa ku tilmaamay in uu yahay madaxwaynuhu nin is yeel yeelaya iyo in ay ka daacad tahay hadalada uu madaxwaynuhu ku hadlo mar walba oo uu shaaric soo istaago kuwaasi oo dadka intooda badan ka yaabiya.